Bloomwell Group na -enweta ego mkpụrụ kacha ukwuu na ahịa cannabis Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Bloomwell Group na -enweta ego mkpụrụ kacha ukwuu na ahịa cannabis Europe
Ndị otu Bloomwell emechiela mkpụrụ ego ihe karịrị nde $ 10 - nke bụ ego mkpụrụ akụ kacha ama ama maka ụlọ ọrụ cannabis Europe ruo taa. Onye ọchụnta ego mbụ bụ onye na -eweta isi obodo uto US Measure 8 Venture Partners, ndị ọkachamara na itinye ego na ụlọ ọrụ cannabis. N'ime ndị ọzọ na -etinye ego, mmụọ ozi azụmahịa Dr. Reinhard Meier na -etinye ego ọzọ site na ego Venture Capital Investors; na Maazị Weber nke FPS rụrụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ iwu Bloomwell.
Otu Bloomwell emechiela mkpụrụ ego ihe ruru nde dollar iri-itinye ego mkpụrụ akụ kacha ama ama maka ụlọ ọrụ cannabis nke Europe ruo taa. Onye ọchụnta ego mbụ bụ onye na -eweta isi obodo uto US Measure 8 Venture Partners, ndị ọkachamara na itinye ego na ụlọ ọrụ cannabis. N'ime ndị ọzọ na -etinye ego, mmụọ ozi azụmahịa Dr. Reinhard Meier na -etinye ego ọzọ site na ego Venture Capital Investors; na Maazị Weber nke FPS rụrụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ iwu Bloomwell.
N'ikwekọ na ọkwa ahụ, otu Bloomwell, nke gụnyere Algea Care, ụlọ ọrụ telemedicine na -eduga na Europe maka cannabis ọgwụ n'ihe gbasara ọnụọgụ ndị ọrịa, na -edozigharị onwe ya dị ka ụlọ ọrụ na -ejide ya, na -enye ya ohere iwu, itinye ego ma ọ bụ nweta ụlọ ọrụ cannabis.
“Site na Bloomwell, anyị na -agbagharị nlekọta ahụike site na digitalization na ike nke cannabis ọgwụ yana ọgwụ ndị ọzọ sitere n'okike. Companieslọ ọrụ Pọtụfoliyo anyị ga -elekwasị anya n'ụzọ zuru oke na ụzọ ndị ahịa na -eji eme ihe ọnụ na usoro uru cannabis ọgwụ niile, ewezuga ịkọ ihe. Oge nke ọgwụ sitere n'okike na-amalite ugbu a na Bloomwell na-ebute ụzọ, "Niklas Kouparanis, onye isi & onye guzobere Bloomwell Group kwuru.
N'ime otu afọ, Bloomwell Group amụbaala ruo ndị ọrụ 160, na -atụkwa anya na a ga -enweta ego ruru nde euro ise na 2021. Na mgbakwunye Niklas Kouparanis, onye isi ala, onye ọchụnta ego na onye ọsụ ụzọ cannabis, onye isi telemedicine bụ Dr. Reinhard Meier, onye dịka onye nchoputa dugara Teleclinic ka ọpụpụ, Onye rụpụtara ya Samuel Menghistu na Boris Jordan, onye hiwere otu Measure 8 Venture Partners.
Kọmitii ahụ mezuru na -ekpuchi akụkụ dị iche iche na ọgwụ, digitalization, cannabis, itinye ego na ụlọ ika n'ofe ahịa dị iche iche.
Dr. Reinhard Meier, Onye isi Radiology na Westpfalz Klinikum, tọrọ ntọala na itinye ego n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụike yana ibido ọtụtụ ego VC.
Boris Jọdan, Site na inweta EMMAC $ 285M, Curaleaf bụ onye mbụ na naanị MSO nwere ọnụnọ bara uru na Europe. A na -ewere Jordan dị ka otu n'ime ndị ọkachamara cannabis ama ama na North America ma bụrụ onye na -ahụ maka arụmọrụ Curaleaf, ụlọ ọrụ cannabis zuru ụwa ọnụ, yana itinye ego na oghere cannabis site na Measure 8 Ventures.
Niklas Kouparanis, onye ọchụnta ego, na ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ cannabis ọgwụ Euopean.
Samuel Mengistu, na -ebute ụzọ nkwụsị nke ụlọ akụ, itinye ego, M&A Azụmahịa na IPO ruo ihe karịrị afọ isii.
“Ọtụtụ n'ime atụmanya dị elu nke ndị na -etinye ego na ụlọ ọrụ ụwa n'ime ụlọ ọrụ cannabis Europe emezughị kemgbe ewepụtara 'Iwu Cannabis' na Machị 2017, n'agbanyeghị na ahịa ahụ na -aga n'ihu na -aga n'ihu. Site na Bloomwell, anyị egosila n'ime naanị otu afọ ego ole a ga -enweta site na ịkwụ ụgwọ azụmaahịa. Industrylọ ọrụ cannabis Europe na -emepe emepe nwere ikike maka mmepe Bloomwell n'ọdịnihu. Ọ bụ ezie na ahịa na-agbakọba ebe ọzọ, akara niile na-atụ aka na uto na mmụba site na njikọta cannabis, imepụta ihe ọhụrụ, digitalization na D2C radical ma ọ bụ ịbịaru onye ọrịa nso, "Anna-Sophia Kouparanis, Onye-guzobere Bloomwell Group kwuru.
"Germany bụ onye isi ahịa Europe maka cannabis ọgwụ na Bloomwell Group egosila n'ime otu afọ na ọ nwere ike ịchọpụta ma tụọ ihe ngwọta ọhụrụ n'ahịa uto ọhụrụ a maka abamuru nke ndị ọrịa. Cannabis nwere ọdịnihu na -enwu enwu na Europe ma anyị na -atụ anya ịkwado na isoro Bloomwell Group rụọ ọrụ ka ha na -aga n'ihu na -abawanye, "Boris Jordan, Onye Mmekọ Ntọala nke Measure 8 Venture Partners na Onye isi oche Curaleaf kwuru..
“Digitalization bụ isi ihe n'ikpeazụ itinye ndị ọrịa na etiti usoro nlekọta ahụike adịghị arụ ọrụ. Nlekọta Algea, ụlọ ọrụ Pọtụfoliyo nke Bloomwell, egosilarị na ọ nwere nka na nka iji melite ọdịmma na ndụ kwa ụbọchị nke ọtụtụ puku ndị ọrịa na ngalaba a na-achịkwa nke ọma site na cannabis ọgwụ na digitalization yana ụkpụrụ ọrụ dị oke elu. , ”Ka Dr. Reinhard Meier kwuru.